Omume Kachasị Mma maka Oge Ezumike | Martech Zone
Omume Kachasị Mma maka Ezumike
Ndị ahịa hụrụ ire ahịa email. N'ezie, mgbe nyocha, ndị na-azụ ahịa na-ekwu na email bụ otu ụzọ kachasị amasị ha maka ịnweta onyinye na mbelata ego sitere na azụmaahịa ha na-arụ ọrụ. Oge ezumike a agaghị adị iche na ịkwesịrị ịhazi ya. Nwalee, nkebi ma bulie ugboro ole email gị oge ezumike a ma nwee ike ịchụpụ ọtụtụ azụmaahịa!
Martech Zone na Delivra emepụtala ihe omuma a iji nyere gị aka ịhazi oge email gị, na-enye anyị email omume kacha mma, kalenda na ọnụego emeghe, na ụzọ ndị ọzọ iji nwalee ma kewaa ndị ahịa gị.
Tags: Krismaskpaliri omume kacha mmaemail ezumike ogeemail Marketingememe